Na ebe nchekwa nke a obi ike pastọ ke Cuba
Cuba na-eto eto na chọọchị!
Olof Amkoff, aka nri nke picture na Donald Appelfeldt m ekpe. Pastor Thomas Scull hụrụ ya na nwunye ya Ruby na ụmụ ha: Sarah, Elizabeth na Tomasi.
1998 iwu ndị ọchịchị ya na-anọgide na-enwe "cultos", ofufe, na ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ọtụtụ ugboro.
On anyị njem Cuba, m nwere oge na Kalle Appelfeldt Ajụjụ ọnụ Pastor Fernando Leyva, tupu ọ nwụọ a izu gasịrị. O guzo n'etiti na Bible na aka.
Communist buso unu mere Marxist MPLA agha okpuru
Ọ bụ a Kọmunist ma kwere na Castro si mgbanwe na e zigara Angola ọgụ ihe Marxist MPLA okpuru n'akụkụ megide UNITA agha okpuru n'oge agha obodo nke malitere na 1975.
Ọ lụrụ agha ruo afọ abụọ na Angola ma na-arụsi ọrụ ojii na 10 afọ. Nke 40,000 Cuban agha na Angola, 15,000 nwụrụ, na mgbe Fernando a gwara ya na nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ enyemaka-akwụ ụgwọ ndị gbara aka, ọ na-ka edikpu na ndị ọchịchị na ọchịchị Kọmunist na ọ kwụsịrị ikwere na ha abụọ.
E zọpụta na a olili ozu
Mgbe ya nwa nwanne nne 7-afọ nwa nwụrụ na 1990, ọ nọ mgbe a na-eli, na nwere onye na-ekwusakwa ozi ọma nke Jizọs na Ọ bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mgbe ahụ, ọ na-azọpụta, na nwunye ya a ọnwa gasịrị.
Ọtụtụ ndị agha na otu òtù a zọpụta, ma agadi ndị ọrụ agha na ndị ọchịchị, ma ole na ole na-ama na-aga na ya n'ihu ọha n'ihi na mgbe ahụ, ha chụọ n'ọrụ.
A nwaanyị party mmume onye n'ịgba nwere ya aturu mkporo na 1990s, o zutere naanị na nso nso, mgbe o kwupụtara ya onwe ya a Christian!
15 Kraịst ụka
Fernando nyere ọzụzụ dị ka a pastọ na tọrọ ntọala ihe Kraịst na chọọchị dị n'ụlọ ya obodo nke Bejucal na 25,000 bi na ya. Mgbe ahụ, e nwere na-a na chọọchị Katọlik na a ọchịchị friendly Baptist chọọchị, ma nke nkà mmụta okpukpe. Ugbu a, e nwere 15 Kraịst ụka n'ebe ahụ.
Nọ n'ụlọ mkpọrọ
Ma ọ taworo uta mmachibido iwu na nọgidere na-na nzukọ ha. O kwụsịrị kpam kpam ha egwu nke ọchịchị na àmà n'atụghị egwu na okwukwe ha na "Kraịst" ruo ọnwụ ya urua.
Ahụla Cuba ibe
Nso nso, o duuru a isi-ndi-agha ka i kwere. O kwuru na anyị N'ajụjụ ọnụ ya na ọ bụ "na-asọpụrụ Pastor Thomas Scull (aka nri nke Fernando) ndị na-hụrụ Cuba enyefe ya afọ 70 ndụ a na-kpam kpam na-adịkwaghị ekweghị na Chineke, Marxism, Katọlik, animism, na ugbu a nwere ọtụtụ vibrant Pentikọstal na Kraịst ụka gburugburu agwaetiti ahụ, omume anyị na-ekpe ekpere na nnọgidesi ike. Anyị kwesịrị ntụkwasị obi ruo ọnwụ, n'agbanyeghị blacklisting na ihe ndị ọzọ, ma Chineke mezuru nkwa ya anyị! "
Next afọ, ndị ọchịchị ga-ahụ na ọ bụ 100 afọ gara aga, Pentikọstal ije wee Cuba. Ọ ga-televised omume na nyeworo a ogbako ewu maka nzube!
Vecka 49, torsdag 9 december 2021 kl. 13:30